Fivorian’ny filankevitra – CUA : hodinihina ny zotra an-dalamby sy ny “transport par cable” | NewsMada
Fivorian’ny filankevitra – CUA : hodinihina ny zotra an-dalamby sy ny “transport par cable”
Anisan’ny hodinihina amin’ny fivorian’ny filankevitry ny Tanànan’Antananarivo ary andraisana fanapahan-kevitra ny momba ny fitaterana an-dalamby sy ny fitaterana an-tariby « transport par cable ». « Ilaina ampiana ny sehatry ny fitaterana satria tsy ampy izany amin’izao fotoana izao. Efa nentina teto ny momba ny fitaterana an-tariby nijerena ny toerana hanorenana ny fiantsonana amin’izany. Tetikasan’ny fanjakana io fa hisitraka izany kosa isika eto anivon’ny CUA. Tena ilaina ireo manoloana ny fahalotoan’ny rivotra sy ny fandaniana solika ary koa ny olan’ny fifamoivoizana », hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina.
Anisan’ny ho entina eo anivon’ny fivoriana hatramin’ny rahampitso koa ny momba ny tanin’ny kaominina etsy Antsahabe sy ny eny Imanahirana Ilafy. Niaiky ny tenany fa tena manahirana ny fijoroan’ny trano eo an-toerana nefa tanin’ny CUA. « Aleo vidin’izy ireo ny tany ary asaina manao trano na birao ampiasain’ny kaominina izy ireo… Maro ny tany tahaka izany, saingy tsy handrodana isika fa ezahina ny tsy hananganana fotodrafitrasa vaovao eo amin’ny tanintsika intsony…”, hoy ihany izy.
Hodinihina koa ny fifanarahana hanavaozana ny tsena kaominaly etsy Ambilanibe.
Nambaran’ny ben’ny Tanàna koa ny fotodrafitrasa momba ny rano, ny fahazoana fitaovana fanamboaran-dalana, ny fametrahana jiro eto an-dRenivohitra ary koa ny nitaterany ny fitsidihana nataony tany Inde, farany teo.